Xog: Yaa iska leh diyaaradii maanta ka degtay Kismaayo, sideese Jubaland ku heshay? | SMC
Home WARARKA MAANTA Xog: Yaa iska leh diyaaradii maanta ka degtay Kismaayo, sideese Jubaland ku...
Xog: Yaa iska leh diyaaradii maanta ka degtay Kismaayo, sideese Jubaland ku heshay?
Dowladda Soomaaliya ayaa rumeysan in diyaaraddii maanta ka degtay magaalada Kismaayo ee jebisay amarkii dowladda uusan lahayn maamulka Jubaland, sida uu sheegtay.
Jubaland ayaa maanta sheegtay in diyaaradda ay kusoo iibsatay lacag ka badan laba milyan oo dollar, si ay u jebiso xayiraadda iyo amarada dowladda federaalka ee ka dhanka ah duulimaadyada Kismaayo.
Ilo-wareedyo ka tirsan dowladda ayaa SOUTHEN MEDIA u sheegay in nooca diyaaradda maanta tagtay Kismaayo ay tahay Fokker 50, oo lambarka diiwaankeedu yahay 5Y-JXJ, waxaana ay ku duuleysay shati ay leedahay shirkadda Jubba Airways.
Warar kale oo ay heshay SOUTHEN MEDIA ayaa dhinaca kale sheegaya in diyaaradda ay u kireysan tahay shirkad uu leeyahay siyaasi iyo ganacasade Soomaali ah oo ku jira dowladda.
Wararkan ayaa sidoo kale sheegaya in Jubaland laga yaabo inaysan si toos ah usoo iibsan diyaaradda balse taa beddelkeeda ay iibsatay saami ka mid ah shirkadda uu leeyahay siyaasiga Soomaaliga ah, sidaas darteedna ay u awoodday inay adeegsato diyaaradda.
Dowladda Soomaaliya ayaa arirntan baaritaan ku haysa waxaana la filayaa inay go’aan kasoo saarto.
Wararkan ayaa weli isa soo taraya, waxaan idinla soo socodsin doonnaa wixii xog dheeri ah oo aan helno, Insha Allah.
Previous articleDaawo Jubbaland oo sheegtay in ay soo iibsatay diyaarad lagu soo qaadayo wafuud ka qeybgalaya munaasabada caleemo saarka
Next articleXOG:Wafdi hogaaminayaan Xasan Sheekh &Sheekh Shariif oo kuwajahan magaalo lagu balamiye si Kismaayo loogu sii qaado